Nifanenjehana tany Mahajanga hatrany Marovoay… : andian-jiolahy mpanao fanafihana ravan’ny polisy | NewsMada
Nifanenjehana tany Mahajanga hatrany Marovoay… : andian-jiolahy mpanao fanafihana ravan’ny polisy
Voalaza fa tena raindahiny amin’ny karazana asan-jiolahy sy fandrobana, efa mpanao fanafihana teratany karana… Ravan’ny polisy rehefa nifanenjehana tany Mahajanga, hatrany Marovoay ity fikambanan-jiolahy malaza ratsy ity.
Noraisim-potsiny tao Marovoay, omaly ny roa amin’ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana lehilahy iray hanatitra vola tao amin’ny Kioska iray fandefasana sy fandraisana vola ao Mahajanga Be. Araka ny fanazavan’ny polisy, nilaza ireto jiolahy ireto nandritra ny famotorana fa tompon’antoka tamin’ny fanafihana maro tao Mahajanga Be, ny volana oktobra 2017 ka isan’izany ny teratany karana iray. Ao anatina fikambanan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika ireto jiolahy ireto, araka ny fanazavana hatrany.
Tsiahivina fa narahin’ireo jiolahy nandeha moto ilay lehilahy nitondra vola ka novelesin’izy ireo tamin’ny maritoa, ny alatsinainy 8 janoary 2018. Nalain’izy ireo ny vola tao anatin’ny sakaosy teny amin’ilay lehilahy. Nisy polisy nandamina fifamoivoizana anefa tsy lavitra ny toerana nitrangan’ny fanafihana ka nandray andraikitra avy hatrany ilay polisy nanenjika ireo olon-dratsy. Tratra tao Mangarivotra Mahajanga ny iray raha tafaporitsaka kosa ny namany niaraka tamin’ny vola. Nentina nikaroka ireo namany ity jiolahy tratra ity, saingy nentiny nivezivezy manerana ny tanànan’i Mahajanga ny polisy, hany ka tsy fantatra mazava izay tena marina momba azy ireo. Nitohy hatrany anefa ny fikarohana ka tonga hatrany Marovoay ny fisamborana ireo olon-dratsy. Nisy vehivavy koa voasaringotra amin’ity raharaha fanafihana ity satria notondroin’ireo jiolahy ho niray tsikombakomba amin’izy ireo.
Lehilahy nandeha moto voaendaka teny Mahamasina
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahadimy Mahamasina, afakomaly maraina koa ny jiolahy iray 24 taona monina eny Anosibe, voarohirohy ho nanendaka lehilahy iray nandeha moto. Nambarany nandritra ny famotoran’ny polisy fa nandeha nody ity lehilahy ity ka nendahiny teny ambony moto. Novahany ny sakaosy teny an-damosiny. Polisy nanao fanamiana sivily nandeha taxi-be no nahatsikaritra ny fihetsiny ka niditra ary nisambotra azy. Tsy afa-bela intsony ity jiolahy ity ka nentina avy hatrany teny amin’ny biraon’ny polisy. Niaiky ny heloka vitany izy tamin’ny fanadihadian’ny polisy. Nohamafisin’ny polisy fa jiolahy efa mpamerin-keloka ity voasambotra ity ka naverina eny am-ponja indray. Efa intelo voatazona teny Antanimora izy, araka ny fanazavany.